Dhacdada Cunnada xagaaga - Cuntooyinka Lugaha
Naga Caawi inaan gaadho 85,000 Cuntooyin!
Taageeradaada micnaheedu waa barnaamijyada Meals on Wheels ee maxalliga ah maahan inay qofna ka leexiyaan waqti ay arkeen ku dhawaad labanlaab baahida dalabka ee caadiga ah. Iyadoo Cunnooyinka Ciribta, xafladeena xagaaga ee sanadlaha ah si aan u taageerno Cuntooyinka Gawaarida, oo hakad ku jira masiibada awgeed, waxaan ka codsaneynaa qof walba inuu naga caawiyo sidii aan u dabooli lahayn baahidaan sii socota ee bulshada. Waxaan fursad u siinaynaa qaar ka mid ah abaalmarino aad u wanaagsan kuwa ku deeqa, iyada oo la ilaalinayo ruuxa Cuntada la jecel yahay ee raffle Heels!
Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa kafaala -qaadeheena Brandography oo bixiyay $5,000 ciyaar ku aaddan yoolkeenna!
cuntooyinka lagu deeqay!
Sii wadista Cunnooyinka Dhaqanka Cidhibta
Sababtoo ah masiibada awgeed, waxaan qaadannay go'aanka adag inaan ka tagno martigelinta kulan ballaaran sannadkan waxaanan xoogga saari doonnaa sidii Cunnooyinka Cidhibta 2022 looga dhigi lahaa kan ugu wanaagsan weli. Waqtigan xaadirka ah, waxaan sii wadnaa dhaqanka raffle Heels on the raffle heels iyada oo samaysa qaar ka mid ah abaalmarino waaweyn oo ay heli karaan kuwa ku deeqa Ololaha Cuntada Xagaaga!
Ku deeq deeqdaada Agoosto 31 si aad ugu qalanto abaalmarintan weyn ee abaalmarinta! Eeg waxa laga heli karo heer deeq kasta.
Tallaabada 1 ee 2
Barnaamijka Cunnada ee Magaalooyinka Mataanaha ah ayaa bixiya
in kabadan 1 milyan oo cunto ah
sannad kastana u qaybiya xaafadaheena.
Cunnooyinka Ku -kafaala -qaadka Cidhibta
Brandography wuxuu ku faanaa inuu la shuraakoobo Cuntooyinka ku Jirta Gawaarida wuxuuna la jaanqaadi doonaa ilaa $5,000 ee deeqaha!
U Adeega Bulshadeena